Waldaan Hawaasa Oromoo Australia Dhiyaa Walgeettii Itoophiyaa Morme!
Date: January 22, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 22 Amajjii 2014) Waldaan Hawaasa Oromoo Australia Dhiyaa haga gaaffiin mirga ummata Oromoo deebii qajeelaa argatutti jila mootummaa Itoophiyaa kamiyyuu waliin marii fi walgeettii akka hin teenne beeksise.
Waldichi ibsa Amajjii 21, bara 2015 baaseen akka beeksisetti, Embaasii Itoophiyaa Kaanbeeraa, Australia irraa walgeettii jila Itti aanaa pirenzidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin durfamu irratti akka argamaniif afeerraan godhameefii ture.
Haataúutii waldichi marii bal’aa hawaasa waliin godheen yeroo ummati Oromoo biyya isaa keessatti ajjeefamaa fi saamamaa jiru kanatti mootummaa mirga ummataa sarbe waliin taa’uun abadan kan hin danda’amne taúu sagalee tokkoon walii galanii jiru.
Waldichi ibsa isaa fuula afur qabu keessatti akka tarreessetti, mootummaan Itoophiyaa yeroo kamiyyuu caalaa ummata Oromoo lafa isaa irraa buqqisaa jira; barattoota gaaffii mirgaa gaafatan gara laafina tokko malee ajjeessaa jira.
Mootummaa akkanaa waliin walgeettii taaúun gonkumaa akka hin dandaámne kana ibse waldichi dhaamsa miidiyaaf tamsaase keessatti miseensoti isaa gamtaanis taée dhuunfaan walgeettii mootummaan Itoophiyaa waamu irratti akka hin hirmaanne illee hubachiisee jira.
Akak waldichi jedhutti, mootummaa Itoophiya waliinis taée jila amootummichaa waliin mariin kan taaámu gaafa hireen murteeffannaa ummataa kabajamee dha; gaafa mirgi pireesii dhugaa kabajameedha; gaafa nagaa fi tasgabbiina kka dhufuuf afaaniin qofaa otuu hin taane hojiindhaan mootummichi mirkaneesseedha.
Xalayaan emabaasii itoophiyaa Kaamberaa irraa gara waldichaatti ergame akka ibsutti kaayyoon walgeettiichaa waan sadii irratti kan xiyyeefatee dha.
Haala siyaasaa biyyayytti irratti marii godhuu, dhimma Misooma manneen diaspooraa irratti odeessa kennuu fi haala Guyyaa Diaspora Addunyaa Oromiyaa irratti marii gaggeessuudha .
Mariin kun Amajjii 24 Hoteela mootummaan Itoophiyaa qopheese keessatti akka gaggeeffamu xalayichi ibsee bakkaa fi saatii garuu ifa hin godhiin hafee jira.
Ibsa Waldichaa: Official Statemen_OCWA
Xalayaa Embasy Itoophiyaa: Ambassador’s Letter
Previous Previous post: URGENT: Statement released by Western Australian Oromo Community
Next Next post: Hawaasti Oromoo Melbourne, Victoriatti Walgahii Wayyaanee Haqsiise